Corporate Blogging: Wepamusoro Gumi Mibvunzo kubva kumakambani Martech Zone
Corporate Blogging: Wepamusoro Gumi Mibvunzo kubva kumakambani
Chitatu, July 18, 2007 Chipiri, May 3, 2016 Douglas Karr
Kana paine chinhu chimwe chete chinokudhonzera iwe kuchokwadi, chiri kusangana nemabhizimusi ematunhu kuti vakurukure kublogi uye vezvenhau.
Mikana ndeyekuti, kana iwe uchiverenga izvi, iwe unonzwisisa blogging, social media, social bookmarking, search engine optimization, nezvimwe Ndiwe wega!
Kunze kwe 'blogoshere', yemubatanidzwa America ichiri kurwisana nekutsvaga zita rezita uye kuisa peji rewebhu. Ivo chaizvo! Vazhinji vachiri kutarira kumaClassifieds, epaMapeji eYellow uye neDirect Mail kuti shoko ribude. Kana uine mari, pamwe unotombopinda muRadio kana TV. Aya ndiwo masvikiro ari nyore, handizvo here? Ingo isa chiratidzo, gwapa, kushambadzira ... uye mirira kuti vanhu vazvione. Aihwa analytics, kutarisa peji, vashanyi vakasarudzika, chinzvimbo, zvibvumirano, pings, trackbacks, RSS, PPC, injini dzekutsvaga, chinzvimbo, masimba, kuiswa - ingo tarisira uye unamate mumwe munhu anoteerera, anotarisa kana anotarisa kukambani yako.
Ichi chinhu chewebhu chiri kwete nyore kune chaiyo kambani. Kana iwe usingatendi ini, mira nedunhu Musangano Webhu yevatangi, musangano wedunhu wekushambadzira kana Chamber of Commerce chiitiko. Kana iwe uchinyatsoda kuzvinetsa pachako, tora iwo mukana kutaura. Iko kuvhura kwemaziso!
Wepamusoro Gumi Mibvunzo paBlogging kubva kumakambani:
Chii chinonzi blogging?
Sei tichifanira blog?
Ndeupi musiyano uripo pakati peku blogga uye webhusaiti?
Ndeupi musiyano uripo pakati pekublogi newebhu foramu?
anoita yaiita sei zvikuru?
Tinofanira kuzviita kangani?
Tinofanira here kutora yedu blog pane yedu webhusaiti kana kushandisa yakagadziriswa mhinduro?
Ko zvakadiniko nezvakataurwa?
Unogona kupfuura munhu mumwe chete blog?
Isu tinodzora sei chiratidzo chedu?
Kuve ndakanyura muindasitiri, ndakashamiswa pandakatanga kunzwa iyi mibvunzo. Wese munhu aisaziva nezve blogging? Wese mushambadzi aive asina kudzika mumasocial media sezvandaive?
Heano Mhinduro Dzangu:
Chii chinonzi blogging?Blog ingori ipfupi kune weblog, yepamhepo magazini. Kazhinji, bhurogu inoumbwa nezvakatumirwa zvine misoro yepamusoro uye zvinowanzoburitswa. Imwe neimwe posvo inowanzo kuve neakasarudzika kero yewebhu kwaunogona kuiwana. Imwe neimwe posvo kazhinji ine nzira yekutsanangudza kukumbira mhinduro kubva kumuverengi. Blogs anodhindwa kuburikidza neHTML (saiti) uye RSS anofudza.
Sei tichifanira blog?Blogs zvakare ane yakasarudzika yepasi tekinoroji iyo inowedzera yekutsvaga injini matekinoroji uye kutaurirana nevamwe blogger. Vakakurumbira mabloggi vanowanzoonekwa sevatungamiriri vanofunga mumaindasitiri avo - vachibatsira kusimudzira mabasa avo kana mabhizinesi avo. Blogs dziri pachena uye dzinotaurirana - kubatsira mabhizinesi kugadzira hukama nevatengi vavo uye tarisiro.
Ndeupi musiyano uripo pakati peku blogga uye webhusaiti?Ini ndoda kuenzanisa webhusaiti nechiratidzo chiri kunze kwechitoro chako uye bhurogu yako inobata ruoko kana patron achifamba pamusuwo. 'Brochure' mawebhusaiti ewebhu akakosha - ivo vanogadzira zvigadzirwa zvako, masevhisi, nhoroondo yekambani, uye kupindura zvese ruzivo rwekutanga urwo munhu angave achitsvaga nezvekambani yako Iyo blog ndipo paunonyatso kuzivisa hunhu kuseri kwekambani yako zvakadaro. Iyo blog inofanira kushandiswa kudzidzisa, kutaurirana, kuita kushoropodzwa, kutyaira kushingairira uye kutsigira chiono chekambani yako. Zvinowanzoita zvishoma zvishoma, zvisina kupenyeswa, uye zvinopa ruzivo rwega - kwete kungotengesa kushambadzira.
Ndeupi musiyano uripo pakati pekublogi newebhu foramu?Zvichida chikuru pane zvese nezve blog ndechekuti blogger inotyaira meseji, kwete mushanyi. Nekudaro, mushanyi anosvika pakuzvitambira. Iyo webhu foramu inobvumira chero munhu kuti atange hurukuro. Ini ndinowanzoona chinangwa chevaviri zvakasiyana. IMHO, maforamu haatsivi mablog kana zvinopesana - asi ini ndaona kubudirira kuita kweese ari maviri.
anoita yaiita sei zvikuru?Zvinoita sei vakasununguka kurira? Kune toni blogging kunyorera kwedu uko - zvese zvakagamuchirwa uye software iyo iwe yaunogona kumhanya pane yako wega blog. Kana vateereri vako vari vakuru, iwe unogona kumhanyira mune mamwe mabhendi ebhendi ayo angangoda kuti iwe utenge mune irinani rekutora pasuru - asi izvi hazviwanzo nyore Kubva pamaonero emakambani, ini ndaizoshanda neyako webhu inomiririra kana yako kambani yekusimudzira kuwedzera yako nzira dzekublogi uye wozvibatanidza pamwe neako bhurocha saiti kana chigadzirwa, hazvo! Ivo vaviri vanogona kurumbidza mumwe nemumwe zvakanaka!
Tinofanira kuzviita kangani?Kakawanda hakukoshe sekuenderana. Vamwe vanhu vanobvunza kuti kangani ini ndinoshanda pablog rangu, handifunge kuti ndiri akafanana. Ini ndinowanzoita zvinyorwa zviviri pazuva… imwe iri manheru uye imwe yacho yakatemwa nguva (prewritten) iyo inoburitsa mukati mezuva. Manheru ega ega nemangwanani ndinowanzopedza 2 kusvika 2 maawa ndichishanda pablog rangu kunze kwebasa rangu renguva dzose.Ndakaona akanaka mabloggi ayo anotumira maminetsi mashoma mashoma uye mamwe anotumira kamwe pasvondo. Ingo ziva kuti kana iwe uchinge waisa zvinotarisirwa nezvakajairwa zvinyorwa zvaunofanirwa kuchengetedza izvo zvinotarisirwa, zvikasadaro ucharasikirwa nevaverengi.
Tinofanira here kutora yedu blog pane yedu webhusaiti kana kushandisa yakagadziriswa mhinduro?Kana iwe wanga uri wenguva yakareba muverengi wangu, iwe unozoziva kuti ini pachezvangu ndinoda kuitisa yangu yega blog nekuda kwekuchinjika iyo inondipa ini mukugadzirisa dhizaini, kuwedzera mamwe maficha, kugadzirisa kodhi yacho pachangu, nezvimwe kubva zvanyora iwo maposta, zvakadaro, akagadziriswa mhinduro akanyatso simudza bhaa. Iwe unogona ikozvino kushanda neyakagadziriswa mhinduro, uve neyako domain zita, gadzirisa yako theme uye wedzera maturusi uye maficha zvakada kuita sekunge iwe wanga uchigamuchira yako yega. Blogger asi nekukurumidza akaiendesa kune yakagadziriswa mhinduro uchishandisa WordPress. Ini ndaida kuve 'neyangu domain' uye kugadzirisa saiti yacho kumberi. Handidi kuodza moyo chero munhu - kunyangwe mubatanidzwa - kubva pakushandisa mhinduro yakamisikidzwa senge Vox, Typepad, Blogger or WordPress kungotanga uye kuyedza.
Kana yako mubatanidzwa iri yakakomba chaizvo, ini ndainyatso tarisa mamwe mablogging 2.0 mapakeji akafanana Kuwedzera!
Compendium Software yakatangwa neshamwari dzangu mbiri dzakanaka, Chris Baggott naAli Sales, uye ndiko kushanduka kunotevera kwekubloga.
Ko zvakadiniko nezvakataurwa?Vamwe vanhu vanotenda kuti haugone kuve neakavimbika blog kutoti chero munhu uye nemunhu wese anogona kutaura nezvazvo - kunyangwe iri manyepo kana kutuka. Izvi zvinongova zvisina musoro. Unogona kubuda pamashoko zvachose - asi uri kurasikirwa nezvakakosha zvinogadzirwa nevashandisi! Vanhu vanopindura pablog rako vanowedzera ruzivo, zviwanikwa, uye mazano - vachiwedzera zvese kukosha uye zvemukati.Yeuka: Tsvaga injini dzinoda zvemukati. Mushandisi akagadzira zvemukati zvinonakidza nekuti hazvibhadhare iwe asi zvinopa vateereri vako zvimwe! Panzvimbo pekunge pasina zvataurwa, ingo zvimisikidza ako makomendi woisa yakanaka nhaurwa yekutaura panzvimbo. Yako poindi mutemo inogona kupfupika uye yakapusa, Kana iwe uine hutsinye - ini handisi kutumira chako chirevo! Zvinogadzira zvisina kunaka zvirevo zvinogona kuwedzera kuhurukuro uye kuratidza vaverengi vako kuti uri rudzii rwekambani iwe. Ini ndinowanzo tenderera ese asi anonyanya kuseka kana iyo SPAM. Kana ini ndadzima chirevo - ini ndinowanzo tumira email munhu uye ndovaudza nei.
Unogona kupfuura munhu mumwe chete blog?Ndizvozvo! Kuva nezvikamu uye maBloggi mukati mega ezvikamu izvi zvinonakidza. Sei uchiisa kumanikidza kwese pamunhu mumwe? Une kambani izere netarenda - isa iko kushandisa. Ini ndinofunga iwe uchanyatsoshamiswa neako mabloggi ako akasimba uye anozivikanwa (ndingave ndinoda kubheja ivo havazove vako vekutengesa vanhu!)
Isu tinodzora sei chiratidzo chedu?80,000,000 mablog munyika uye nemazana ezviuru akawedzerwa vhiki rega rega… fembera chii? Vanhu vari kubloga nezvako. Gadzira Google Alert yekambani yako kana indasitiri uye iwe unogona kuona kuti vanhu vari kutaura nezvako. Mubvunzo ndewokuti iwe unoda here kwavari kudzora mhando yako kana iwe kudzora mhando yako! Kubhuroka kunopa huwandu hwekujeka izvo makambani mazhinji asina kugadzikana nazvo. Isu tinoti tinoda kuve pachena, tinoda kukurudzira kujekesa, asi tinotya kufa kwazviri. Icho chinhu icho kambani yako iri kungo fanirwa kukunda. Mukuvimbika kwese, zvakadaro, vatengi vako uye tarisiro vanotoziva kuti hauna kukwana. Unozokanganisa. Iwe unozoita zvikanganiso neako blog, futi.Uhukama hwekuvimba hwauri kuvaka nevatengi vako uye tarisiro zvichakunda chero kutsvedza-kwaunoita iwe.
Tags: Bloggingblogging mibvunzoblogospheremuchisokambani blogkubatanidzwa bloggingkubatanidzwa kubhurogira madummiesMarii inoita yekublogitinofanira blog kanganizvisina kunaka kutauraisu tinofanirwa kugamuchira yedu blogchii chiri bloggingndeupi mutsauko uripakati peblog uye webhusaitisei tichifanira blog
Blog-Kubvarura: Iyo Yei Kushambadzira Blog
Jul 19, 2007 na2: 19 PM
Kubloga hakusi nyore sezvandaifunga kuti ndizvo, ndine mubvunzo lil, ndinobva kuVenezuela, blogging muno haina kunyatso kuzivikanwa seyahoo kana Google… asi inofanirwa kuve musika wakanaka mumakore mashoma, saka ikozvino ndirikutanga neyakareruka blog http://bajaloads.com (lolz ini ndiri pane yekumisikidza runyorwa), ini ndoda kuwedzera yangu brand BajaLoads
(Baja = pasi muSpanish)… ndichigadzira nhau mablog muSpanish, hanzvadzi yangu ichatanga blog, musikana wangu mumwe, uye shamwari yangu mumwewo… vese vari muchiSpanish… uye panguva imwechete ini ndiri zivisa ivo kuyunivhesiti, pamutsetse… kwese pasina spamming, mubvunzo ndouyu: ndingawana nani SEO chinzvimbo kana ndikatumira zvirevo seizvi pane zvinyorwa zveblog zvandinoda? (sezvo ndichifanirwa kupa yangu url nhungamiro uye inoratidzwa muzita rangu reposita)
Jul 19, 2007 na2: 30 PM
yakanaka kwazvo posvo. ndinogara ndichishamiswa nekushayikwa kwekunzwisisa muhuwandu hwevanhu. kana iwe ukashambira mukati, iwe unofunga kufunga kuti munhu wese anoziva nezvazvo. uye hongu, zvinogona kutyisa vanhu vanoziva zvishoma nezve internet, ndoda kubloga. zvakadaro, kuongororwa kunobatsira pamabhizinesi uye kublogga.
Jul 19, 2007 na10: 02 PM
Ini handioni kuona kutaura kwangu, nei iri doug?
Jul 19, 2007 na10: 34 PM
Inotaridza sechinhu chinhu ngoro nemazita acho… Ndiri kushanda pazviri… hmmm.
Jul 19, 2007 na11: 17 PM
saka usazvidya moyo, ndanga ndichingotaura nezve kugadzira yangu "Corporation" muVenezuela, nekuti mablog haazivikanwe kumusoro kuno 😛
Ini ndanga ndichifunga nezvekugadzira maseru madiki senge:
Kuve ivo vese vakamhanyiswa nasisi vangu, musikana wangu uye shamwari yake (handingafanirwe kuvabhadharira mari iyoyo nekuti ndichaita purofiti yangu muUS $ uye ndichabhadhara muVenbolivares).
mubvunzo ndouyu, - Ini ndinowana zvirinani SEO kumisikidza kana ndikaita zvirevo kumabloggi anozivikanwa seizvi? (sezvo ndichifanira kugovana url yangu)
Zvakare ndiri pamutsetse wekubatwa newe :-D, kunyangwe pandakatora mamwe mazano awakapa kune vamwe mabloggi,
rugare hama 😀